आफनै स्वामित्वको बैंक स्थापना गर्दै प्रदेश सरकार - News Today
आफनै स्वामित्वको बैंक स्थापना गर्दै प्रदेश सरकार
जनकपुरधाम, २४ असार । प्रदेश नम्वर २ को सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा प्रदेश विकास बैंक स्थापना गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको समग्र विकासकोलागि सरकारकै स्वामित्वमा बैंक स्थापना अपरिहार्य रहेकोले बैंक स्थापनाको गृहकार्य अघि बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले जानकारी दिएका छन् । बैंक स्थापनाको लागि गृहकार्य गर्न प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार राजकुमार सिंह, जनकपुर स्थित संघीय कोलेनिकाका प्रमुख डा. विरेन्द्र मिश्र, राष्ट्र बैंक जनकपुरको प्रतिनिधि, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सञ्जय सरदार सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कार्यदलले बैंक स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य तथा अवधारणा पत्र तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । कार्यदलका संयोजक डा. हरिवंश झाले अवधारणापत्रमाथिको छलफल शुरु भई सकेको र सम्भवतः यसै साता अन्तिम रुप पाउने बताए ।
Previous : तिलाठी कोईलाडीमा दुई दिनको कार्यक्रम एक दिनमै चट्ट
Next : आमाको काजकिरियाले उठाएको प्रश्न